ईमेल विक्रेता मूल्य निर्धारण दण्ड
हामीसँग एक राम्रो ईमेल सेवा प्रदायकको रूपमा हेर्दा हामीले केहि उतार-चढावहरू पनि पाएका छौं। धेरै ईमेल सेवा प्रदायकहरूसँग केवल एकीकरण उपकरणहरू हामीसँग हुँदैन जुन हामीले हाम्रो ईमेल पठाउँदछ स्वचालित गर्न आवश्यक छ (हामीसँग त्यसबारे केही खबर चाँडै आउँनेछ)… तर हामीले हाम्रो ईमेल प्रोग्रामसँग सामना गरेका सबैभन्दा ठूलो समस्या मुद्रीकरणसँग मिल्ने क्षमताको साथ हो। अनुप्रयोगको लागत।
सीधा बिन्दुमा पुग्नको लागि, केहि सास मूल्य निर्धारण संरचनाहरू केवल साधारण बेवकूफ छन् ... तपाईंको कम्पनीको वृद्धिलाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा दंडित गर्दै। एक व्यवसाय वा उपभोक्ताको रूपमा मेरो अपेक्षा यो हो कि म तपाईंको सेवा अधिक प्रयोग गर्दछु, लागत लाभहरू समतल वा सुधार हुनुपर्दछ (अर्को शब्दमा - प्रति प्रयोग लागत समान रहन्छ वा तल जान्छ)। तपाईंले पाउनु भएको भair्या--पाइला मूल्य निर्धारणसँग यसले काम गर्दैन - विशेष गरी ईमेल विक्रेताहरूको साथ।
यहाँ एक विक्रेताको सार्वजनिक मूल्य निर्धारण (मासिक मूल्य र सदस्यता):
पहिलो नजर मा, यो बरु सुसंगत देखिन्छ ... अधिक सदस्यहरूले अधिक मासिक लागत थप गर्दछ। समस्या संक्रमण मा छ, यद्यपि। मानौं कि म,,। ०० ग्राहकहरुलाई पठाउँदै छु। त्यो प्रतिमाह $$ डलर हो। तर यदि म १०० सदस्यहरू थप गर्दछु, म समस्यामा छु। मेरो मासिक लागत $ १ to० मा डबल्स छ र प्रति ग्राहक लागत%%% बढ्छ। प्रति ग्राहक, प्रणाली को उपयोग को लागत लगभग डबल्स।
यो हाम्रो हालको विक्रेताको साथ यति नराम्रो थियो कि मैले शाब्दिक रूपमा मेरो सम्पूर्ण सूचीमा पठाउन रोक्ें। हाम्रो लागतहरू प्रति महिना per १,००० बाट मासिक $ २,$०० मा गए किनकि मसँग १०,००० सदस्यहरू थिए। यो होइन कि मलाई अधिक पठाउन अधिक भुक्तानी गर्ने मन छ ... यो शाब्दिक हो कि लागतहरूमा सीढ़ी कदम छ जुन म हाम्रो मार्केटिंग प्रयासहरू वा प्रायोजनहरू मार्फत प्रतिपूर्ति गर्न सक्दिन। प्रति ग्राहक, मेरो लागतहरू दोब्बर भन्दा बढी हुनेछ। र म केवल खर्च खर्च फिर्ता लिन सक्दिन।
सेवा प्रदायकको रूपमा सफ्टवेयरले अमेजन वा होस्टिंग प्याकेजहरू जस्तै थ्रेसहोल्डहरू भएको भुक्तान-प्रति-प्रयोग प्रणालीहरूमा नजिकबाट हेर्नुपर्दछ मूल्य ड्रप जब तपाईं आफ्नो व्यापार बढ्नुहुन्छ। तपाईंले बढ्दो व्यापारलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेछ, यसलाई दण्डित गर्नुहुन्न। यदि म १०१,००० को सूचि छ भने, अर्को ग्राहक जो १०,००,००० को सूचि छ मँ प्रति ग्राहक भन्दा कम भुक्तानी गर्नु हुँदैन। त्यो मात्र सादा गूंगा हो।
ईमेल विभाजन र निजीकरण प्रमोट गर्दै
यी प्रणालीहरूको साथ अर्को मुद्दा तपाईंको प्रणालीमा सम्पर्कहरूको संख्याको लागि भुक्तान गर्दैछ तपाईंले वास्तवमा यसको साथ पठाउने भन्दा। यदि मसँग एक मिलियन ईमेल ठेगानाहरूको डाटाबेस छ, म यसलाई आयात गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, यसलाई सेगमेन्ट गर्नुपर्दछ र मलाई थाहा भएको अंशमा पठाउँदा सब भन्दा राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
यी प्रणालीहरू मध्ये धेरैले तपाईंको डाटाबेसको आकारबाट प्रणालीको तपाईंको प्रयोगको तुलनामा चार्ज गर्दछ। त्यो दिमागमा, तपाईं कसरी ब्याच र ब्लास्ट अभियानको लागि कम्पनीहरूलाई दोष दिन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईलाई हरेक सदस्यको लागी शुल्क लगाउन लाग्नु भयो भने तपाईले सबै ग्राहकहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ!
यस मूल्य निर्धारणको परिणाम स्वरूप, यी कम्पनीहरूले मेरो हात जबरजस्ती गर्दैछन्। जबकि म विक्रेतालाई मन पराउँछु र उनीहरूको सेवाको सराहना गर्दछु, ब्यापार खर्चले मेरो व्यवसायलाई अन्यत्र लैजान्छ भनेर आदेश दिन्छ। जब म राम्रो विक्रेतासँग टाँसिन चाहन्छु, जब म मेरो डाटाबेसमा १०० सदस्यहरू थप्छु तब डुब्ने पैसा मसँग छैन।
टैग: ईमेल लागतईमेल मूल्य निर्धारणईमेल पठाउने लागतईमेल सेवा प्रदायकईमेल विक्रेता
मेरो व्यवसायको लागि उत्तम आईटी वातावरण के हो?